आइतबार काठमाडौंका निजी विद्यालयमा विदा ! (विज्ञप्तिसहित) - Nepal Insider
Home/समाचार/आइतबार काठमाडौंका निजी विद्यालयमा विदा ! (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुको छाता सँगठन एन प्याब्सनले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाका नजी विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
रोजगारीका लागि जापान जान कडाइ, अब सजिलै पाइनेछैन एनओसी
काठमाडौं। भाषा अध्ययनको बहाना बनाएर रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या बढेपछि सरकाले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)मा कडाइ गरेको छ । यो समस्या विशेषगरी जापान जानेहरूमा देखिएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ ।
गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म विदेश अध्ययनका लागि ४९ हजार पाँच सय ५६ विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया र दोस्रोमा जापानका लागि यस्तो अनुमति लिएको शर्माले बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
चाडपर्वको मुखमा गाडी भाडाभन्दा पनि सस्तो भयो हवाई भाडा, अब कहाँ जान कति खर्च लाग्छ ?